Baarlamaanka Soomaaliya oo dib ugu celiyay Xukuumada Hindise sharciyadeed ay horkeentay – idalenews.com
Baarlamaanka Soomaaliya oo dib ugu celiyay Xukuumada Hindise sharciyadeed ay horkeentay
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dib ugu celiyay Xukuumada Hindisooyin sharciyeed oo dhowaan Xukuumada ay horgeysay Baarlamaanka, iyadoo Mudanayaasha Baarlamaanka ay su’aalooyin weydiiyeen Wasiirka Garsoorka Diinta iyo Awqaafta Soomaaliya C/llaahi Abyan Nuur.
Kalfadhiga labaad kulankiisa 6aad oo ay isugu yimaadeen Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa waxaa shir gudoominayay Gudoomiye kuxigeenka koowaad ee Baarlamaanka Jeylaani Nuur Iikar, kaasoo ay soo xaadireen ilaa 147-mudane.
Furitaanka kulankaayaa waxaa laga aqriyay saddex qodob oo ay dhowaan Wasaarada Garsoorka soo gudbsiyay, kaasoo kala ah Hindise sharciyeedka xeerka Xuquuqul Insaanka, Hindise sharciyeedka xeerka Golaha sare ee Farsoorka iyo Hindisaha sharciga ee xeerka gudiga kormeerka Garsoorka.
Intaas kadib ayaa waxaa Mudanayaasha Baarlamaanka ay guda galeen dood kulul oo ku saabsan hindisahan, waxaana Xildhibaanada ay soo bandhigeen aragtiyo kala duwan, waxaana Xildhibaanada qaar ay diideen, maadaama wadooyinka loo soo maray ay aheyd mid qaldan oo loo baahan yahay in la saxo.
Wasiirka Garsoorka, Diinta iyo Awqaafta C/llaahi Abyan Nuur oo ay wehliyeen Labadiisa Kuxigeen ayaa faah faahin uga bixiyay Mudanayaasha Baarlamaanka, oo ku aadan hindisayaashan uu soo gudbiyay, iyadoo markii dambe Mudanayaasha Baarlamaanka uu ku adkeystay in dib loo celiyo hindisahan.
Ugu dambeyn Gudoonka Baarlamaanka ayaa dib ugu celiyay hindisahan Xukuumada, si dib u sixid loogu soo sameeyo, waxaana uu noqonayaa hindisayaashii u horeeyay ee Xukuumada soo diyaariso oo uu Baarlamaanka dib u celiyo tan iyo markii todobaadkii hore uu dib u furmay kalfadhigii labaad ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Ra’iisal Wasaaraha oo saaka booqday xerada 54-aad ee ciidanka Xoogga Puntland